Ny kernel Linux farany mifanentana amin'ny Apple M1 efa eo am-pitsapana | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple M1 Compatible Linux Kernel mifanentana dia efa eo amin'ny fitsapana
Efa ela no niaraka taminay ilay puce Apple M1. Chip vaovao izay mamadika ny solo-sain'i Apple ho milina tena izy. Tsy Macs fotsiny, ny iPad Pro vaovao dia manaporofo fa biby. Ireo mpandahatra fandaharana sy mpamorona dia mametraka ny batterie mba hampifanaraka ny fandaharan'asany amin'ity maritrano vaovao ity ary tsikelikely no ahazoana azy. Ny zavatra farany dia izany ny kernel Linux farany dia manolotra fampifanarahana mialoha amin'ny Apple M1.
Ny kinova farany an'ny kernel Linux, Linux 5.13, dia misy ny fanohanana ny rafitra Apple M1 ao amin'ny chip ary ankehitriny Izy io dia azo alaina ho toy ny kinova andrana amin'ny famotsorana farany. Linus Torvalds, dia nanambara fa efa azo zahana amin'ny fitsapana ampahibemaso izao ny kinova famotsoran-keloka.
Na dia nahavita nanangana Linux tamim-pahombiazana ny Linux tao amin'ny Apple Silicon aza ireo manampahaizana manokana momba ny informatika ary indrindra ireo manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana, dia nitaky vahaolana ara-teknika vitsivitsy izany. Miaraka amin'ny fanohanana mialoha amin'ny Linux 5.13, hizara be ny fizarana sy ny rafitra Linux mora kokoa ny mihazakazaka amin'ny Apple's SoC.
Ho fanampin'ny Apple Silicon support, ny kernel Linux 5.13 izy io koa dia misy mpamily vaovao vaovao sy nohavaozina ary fanatsarana anatiny hafa amin'ny rafitry ny rakitra. Ny maritrano, ny fitaovana ary ny fitantanana ny fizotrany, ankoatry ny fanavaozana vaovao hafa. Ny kinova farany an'ny Linux 5.13 dia tokony havoaka amin'ny besinimaro amin'ny faran'ny volana Jona na ny voalohan'ny volana Jolay. Miankina amin'ny isan'ny dikanteny savaranonando ianao manapa-kevitra ny hamoaka ary noho izany fitsapana, mandritra ny tsingerin'ny fampandrosoana ary alohan'ny famoahana ny kinova farany.
Araka ny efa nolazainay teo aloha dia misy fandrosoana vaovao tsikelikely. Izy io dingana vaovao handroso ho fifanarahana Linux mora amin'ny Apple Silicon, Vaovao tsara be ity. Indrindra ho an'ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana izay mampiasa ity rafitra fiasa ity hiasa sy hivoatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny Apple M1 Compatible Linux Kernel mifanentana dia efa eo amin'ny fitsapana
MacBook Pro avo lenta dia tratran'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny M1